Famaranana ny lalao Beach soccer andiany faha-5 | Région Boeny
Famaranana ny lalao Beach soccer andiany faha-5
16 décembre 2014 A La Une, Actualité
Tontosa ny Zoma 12 Desambra 2014 teo ny lalao famaranana ho fiadiana izay ho tompon-dakan’i Madagasikara teo amin’ny taranja Baolina kitra eny amin’ny toram-pasika na Beach soccer andiany faha-5. Ny faritra Boeny no nandray izany, ary teny amin’ny toram-pasiky ny Village Touristique, Mahajanga no natao ny fifanitsanana rehetra.
Nahatonga mpandray anjara avokoa ireo faritra 22. Raha tsiahivina ny teo amin’ny lalao manasa-dalana dia nihaona i Mahajanga mpampiantrano sy i Vatomandry izay resy 03 noho 02. Toamasina kosa nandresy an’i Manakara.
Manakara no nahazo ny laharana faha-3, tamin’ny fandresena 05 sy 02 an’i Vatomandry. Ny lalao famaranana kosa dia nihaona i Mahajanga sy i Toamasina ka mbola i Mahajanga ihany no tompon-dakan’i Madagasikara tamin’ity andiany faha-5 ity.
Nafana ny lalao satria sahala hatrany ny isa azon’ny ekipa roa tonta nandritra ny telo minitra izay mihodina in-4 ka niafara tamin’ny fandakana baolina ny lalao. Teo no nahalavo ny ekipan’ny Faritra Antsinanana izay tsy nahatafiditra baolina ny roa tamin’izy ireo satria olona 03 isakin’ny Ekipa no nofidina raha ny an’i Boeny kosa dia iray ihany no tsy nahatonga ny baolina tany anaty harato.
Vory lanona ny vahoakan’i Mahajanga ary horakoraka no nandraisan’izy ireo izany vokatra izany na dia teo aza ny tahotra nandritra ny fandakana baolina.
Tonga taty an-toerana nanatrika ny lanonana famaranana Atoa Ahamad, tsy amin’ny maha minisitry ny Harena anaty Rano sy ny Jono azy fa amin’ny maha Filohan’ny Federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra azy. Nanotrona azy teo koa ny Tale Jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana, Atoa Robimanana Orlando. Vory maro ireo manam-pahefana sivily sy miaramila avy eto an-toerana notarihin’ny Lehiben’ny Distrikan’i Mahajanga I, nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra Boeny.
Nandritra ny laha-teny nifandimbiasan’izy ireo no nahafantarana fa isan’ny Faritra manana fandaharan’asa vonona avy hatrany ny Faritra Boeny ary tafiditra ao anatin’izay ny Kaomina ambonivohitr’ i Mahajanga izay nahazo famantsiam-bola mitentina 15.000.000.000 Ar entina hanatsarana sy hanamboarana ny tampon-tanana.
Efa miroso tanteraka ny fametrahana ireo foto-draitr’asa ka tokony mba hitandrina sy hiaro azy ireny ny vahoaka hoy izy ireo .Tsiahivina fa nandritra ny efatra andro ny lalao fifanitsanana izay nanomboka ny Talata 09 Desambra ary nifarana ny Zoma 12 Desambra 2014.